ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်း#251742 | Featuring
Home › Music › ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်း
ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်း
by Ko Kyaw OoDuration: 05:44
Downloading ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်းmp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
မထေ မဲ့ မြ င် ငုံ့ ၍ ကြ ည့် စ ဉ် ရ င် မှာဒ ဏ် ရာေ ဝ လ က် တ စ် က မ်းမှာအ သ င့် ရှိနေ ယူ င င် ပို င် စိုးေ လ သံ သ ရာန ယ် တွ င်းအ ရိ ပ် မဲ့ လ မ်းေ ပါ် ဝ ယ်နေ တ စ် ရာပူ ပြ င်းရှိ ရ င်းအ ခွ င့် ဖြ င့် လွှဲ အ ပ်သောကို ယ် ကြ ည် ဖြူ သ က် နှ င်းသ က် ညှာခြ င်းည င် သာစွာဆ င်းည င် သာစွာဆ င်းလ က် ထိ လ က်ရောက်ပေးလှူနေ ခြ င်းေ သွးသား နှ င့် ဖွဲ့ ရ ပ် တ န့် မိ ခဲ့ သ က် ရှိ ရု ပ် ထု ဖြ စ် တ ည်နေ ခြ င်းည င် သာစွာဆ င်းည င် သာစွာဆ င်းပျ တ် ဝ တ် ခွ င့် ပြု ခ င်းပြ န့်စေ ခြ င်းရှ စ် ရ ပ် မှ လှ ည့် တွ န်းလှု ပ် ၍ နဲ့ ဒူးေ ထာက်ခေါ င်းငုံ့ ကျိုးနွံစေ ခြ င်းမရှောင် မိ သူ ထိ ချ က် က နာေ မြ မှာပုံ လဲနေ ဒီ တ စ် ချ က် ဟာအ န က် ဆုံးေ လ ဂု ဏ် ယူ လို က် ဦးေ မသွေ မ ဖ ည် ချ စ် ခြ င်းအ ဆိ ပ် သ င့် သားကောင် င ယ်
ေ ဝ ဒ နာကို ခ င်းဖြ စ်သောဘ ဝ ၌ ချ စ် ရသောကို ယ် ရ ည် ရွ ယ် စိ တ် ရ င်းဆု ပ န် ခြ င်းည င် သာစွာဆ င်းည င် သာစွာဆ င်းလ က် ထိ လ က်ရောက်ပေးလှူနေ ခြ င်းေ သွးသား နှ င့် ဖွဲ့ ရ ပ် တ န့် မိ ခဲ့ သ က် ရှိ ရု ပ် ထု ဖြ စ် တ ည်နေ ခြ င်းည င် သာစွာဆ င်းည င် သာစွာဆ င်းပျ တ် ဝ တ် ခွ င့် ပြု ခ င်းပြ န့်စေ ခြ င်းရှ စ် ရ ပ် မှ လှ ည့် တွ န်းလှု ပ် ၍ နဲ့ ဒူးေ ထာက်ခေါ င်းငုံ့ ကျိုးနွံစေ ခြ င်းကြိုးပ မ်း၍ အား ထားစောင့်မျှော် မ ဆို င် ရာေ ချ ရ င်းညှိုးနွ မ်း၍ လ က်လျှော့ ထွ က် ခွာခြ င်းသို င်းဝို င်း၍ သိ မ်းပို က်ပြောင်းေ ရွှ့ အ နို င် ရှာလ က် တွ င်းလှို င်းပု တ် ၍ ကွဲ အ က် ပျ က် ပြို ခြ င်း
Watch video on Youtube: ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်း
Search another results: ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်း
Post related to ည င် သာစွာဆ င်း- ခ င် ဝ မ်း:
[04:59] ချ စ် စိ တ် င ယ် င ယ် - လွှ မ်းမိုးBy Ko Kyaw Ooချ စ် စိ တ် င ယ် င ယ် - လွှ မ်း...
[02:49]ပေးဆ ပ် မဲ့ အ ချ စ် -စောခူ ဆဲ လ် ၊လေးေ လးဝါးBy Ko Kyaw OoEAGLES - TEQUILA SUNRISE
[05:04] ဘ ဝ နဲ့ အ ချ စ် - စ တု န်း၊အေးချ မ်းေ မBy Ko Kyaw Oo姜育恆&葉歡 天天等天天問 http://www.youtube.com/watch ...
[03:39] လူြ​က​မ်း​မှာ​လ​ည်း အသ​ည်းနှ​လုံး​နဲ့​​ပါBy Kamayut Mediaရုပ်ရှင်ဇာတ်လ​မ်းေ​တွ​� ...
[03:15] သ​ည်ေ​မ်ာနိုင်ရဲ့​ The Monk ရုပ်ရှင်ကားြ​မန်မာေ​တွြ​ကိုက်ပါ့​မ​လားBy Kamayut Media(အမှားပြင်ဆင်ခြင်း)